Warar - Kala soocida biibiile aan xuduud lahayn
1. Kala soocista habka wax soo saarka
(1) Tuubo aan xuduud lahayn - tuubbo kulul oo duuban, tuubbo qabow oo duuban, tuubbo qabow, tuubooyin extrusion, tuubbo tuubbo (2) Tuubbo Alxan (a) Marka loo eego hannaanka - tuubbada alxanka qaansada, tuubbada alxanka iska caabinta (soo noqnoqoshada badan, soo noqnoqodka hoose) , Dhuumaha alxanka gaaska, foornada alxanka foornada (b) sida ku xusan xariiqa alxanka - biibiile toosan oo alxan, biibiile muquuninta muquuninta ah.
A. Tuubo bir ah oo aan xaddidneyn oo kulul: duudduuban kulul ayaa ka soo horjeedda qabow duuban, oo lagu duudduubay ka hooseeya heerkulka dib u soo celinta. Wareejinta kulul ayaa ka sarreysa heerkulka recrystallization.
Ku habboonaanta: waxay burburin kartaa hay'adda wax lagu rido, nadiifinta hadhuudhka birta waxayna ka saari kartaa cilladaha microstructure, taas oo ka dhigaysa kooxda birta ah mid isku dhow, waxqabadka farsamada ayaa la hagaajiyay. Horumarkan ayaa inta badan ka muuqda jihada rogista, sidaas darteedna birtu maya isotropic dheer ilaa xad, goobooyin, dildilaaca iyo dabacsanaanta la sameeyay inta lagu guda jiro daadinta ayaa sidoo kale lagu dhejin karaa heerkulka sare iyo cadaadiska.
B. Biibiile bir ah oo duuban: Qaboojiye bilaa biin ah oo qabow-duuban (GB3639-2000) ayaa loo adeegsadaa qaab dhismeedka farsamada iyo qalabka haydarooliga oo leh saxnaan cabbir sare iyo miis
Tuubooyin bir ah oo aan xaddidnayn oo qabow la soo jiiday ama saxan oo duudduuban oo dusha sare ku habboon.
Faa'iidooyinka: waxay burburin kartaa qaab dhismeedka tuurista birta birta ah, waxay sifeynaysaa hadhuudhka birta, waxayna tirtiri kartaa cilladaha microstructure, si markaa microstructure-ka birtu u noqdo mid is haysta oo guryaha farsamooyinkuna loo horumarin karo. Hormarintani waxay inta badan ka muuqataa jihada rogista , sidaa darteed biraha ma aha isotropic ilaa xad; Xumbada, dildilaaca iyo dabacsanaanta la sameeyay inta lagu guda jiro daadinta ayaa sidoo kale lagu dhejin karaa heerkulka sare iyo cadaadiska.
C. Tuubada extrusion: Tubbada faaruqda ah ee maran waxaa lagu dhejiyaa dhululubo xiran, iyo usha daloola waxay ku dhaqaaqdaa usha extrusion si ay uga dhigto qaybta extrusion inay ka soo baxdo godka dhinta yar.Habkani wuxuu soo saari karaa tuubo bir ah oo dhexroor yar leh.
Ku-habboonaanta: Is-waafajinta birta wanaagsan iyo qaab-dhismeedka lebiska, waxay ku habboon tahay soo-saarista ku dhowaad dhammaan noocyada tuubooyinka birta, gaar ahaan soo-saaridda alloy-sare, bir aan qaab-dhismeed lahayn iyo dhammaan noocyada tuubooyin-iskutallaab gaar ah u qaabeysan. Sababtoo ah waxqabadkeeda waxsoosaarka, alaabada tuubada birta ah ee kulul ee la soo saaray waxay leeyihiin rajo codsi oo aan la bedeli karin dhammaadka iyo qaybaha muhiimka ah ee dhaqaalaha qaranka sida warshadaha militariga, awoodda nukliyeerka, awoodda kuleylka, duulista, macdanta, ceelka saliidda iyo warshadaha kiimikada. Dadaallada cilmi baarista iyo horumarinta waxqabadka sare, maadada tikniyoolajiyadda sare iyo qiimaha sare lagu daray ee alaabada dhuumaha birta kulul laga soo saaray, si kor loogu qaado horumarka tikniyoolajiyadda biibiile-dhamaadka sare ee qaranka loona xoojiyo awoodda dhaqaale ee dhameystiran waxay leedahay muhiimad fog
3. Kala soocista qaabka qaabka
) tuubooyinka birta ee laba geesoodka ah oo aan sinnayn, shan-lobe tuubooyin bir ah oo qaabkeedu u eg yahay.
Tuubo, tubbo bir ah oo laba jibbaaran, tubbo bir ah oo laba jibbaaran, tuubbada birta ah ee xabxabka, tuubbada birta birta ah, tubbada birta jiingadda, tuubbada birta ee saacadda, iyo kuwo kale.
4. Kala soocista dhumucda gidaarka - tuubo bir ah oo dhuuban-dhuuban, tuubbo bir bir ah oo dhumuc weyn leh.
5. Qoondaynta adeegsiga - tuubbada, qalabka kuleylka, warshadaha farsamada, batroolka, qodista juqraafiga, weelka, warshadaha kiimikada, ujeedo gaar ah, kuwa kale.